”Can 2019” – Barea / Nizeria ”…Hitady fandresena no ahatongavanay aty”, hoy Nicolas Dupuis | NewsMada
”Can 2019” – Barea / Nizeria ”…Hitady fandresena no ahatongavanay aty”, hoy Nicolas Dupuis
Hitodika any amin’ny kianja Alexandrie, Egypta, avokoa ny mason’ny mpijery baolina kitra rehetra, rahampitso alahady, indrindra fa ny Malagasy. Hiady ny laharana voalohany, ao anaty sokajy B mantsy ny Barea sy ny Voromaherin’i Nizeria.
Hiditra amin’ny andro fahatelo fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, ny vondrona B misy ny Barean’i Madagasikara, rahampitso alahady. Hangotraka izany fihaonana izany satria hiady ny laharana voalohany ny Voromaherin’i Nizeria sy ny Barea de Madagascar.
Hatreto, efa nahazo ny tapakila hiatrehany ny ampahavalon-dalana ny Nizerianina, efa manana isa 6, taorian’ny fandresena roa azony. Mbola hanamafy izany kosa ny Malagasy, izay vao ny tongony ila no manitsaka izany dingana izany. Isa 4 ny ao anaty kitapon’ny Barean’i Madagasikara. “Sarotra nefa tsy maintsy hiezaka izahay. Tsy misy kajikajy atao fa tsy maintsy hitady farafaharatsiny isa 1, amin’ny fihaonana amin’i Nizeria, hahazoana mitazona ny toerana faharoa. Hanao izay hahafahana mandeha lavitra araka izay ho tratra. Mino aho fa ho tafita any amin’ny dingana ampahavalon-dalana ny Barean’i Madagasikara”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra.
Mila mitazona ady sahala
Ady sahala dia ampy hanohizan’ny Barean’i Madagasikara ny lalany amin’ity “Can 2019” ity. Nohamafisin’i Dupuis fa hisehoan’ny zavatra tsy ampoizina ny baolina kitra. Mety ho fahagagana lehibe ny hahazo isa 1 na isa 3 mihitsy amin’i Nizeria. “Hilalao ny hisianay eto, ary hitady fandresena sy hanome fahafinaretana ho an’ny vahoaka malagasy. Ambony i Nizeria raha mitaha aminay toa an’i Ginea. Hiady ny Barea”, araka ny fanambaran’i Nicolas Dupuis, taorian’ny lalao nikatrohany tamin’i Burundi, ny alakamisy lasa teo.
Tsiahivina fa hanomboka amin’ny 7 ora hariva eto Madagasikara ny lalaon’ny roa tonta. Nisy feo niely tany Egypta fa nesorina amin’ny toerana maha mpanazatra azy i Nicolas Dupuis, noho ny taktika napetrany tamin’ny fihaonana tamin’i Burundi. Endrika fanakorontanana fotsiny ihany anefa izany, araka ny vaovao voaray.